विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि, जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस, हेर्नुहोस् उत्तर पुस्तिका - Hulaki Samachar
मुख्य पृष्ठ /रोचक/विद्यार्थीले परीक्षामा यस्तो जवाफ लेखेपछि, जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस, हेर्नुहोस् उत्तर पुस्तिका
23,2062minutes read
विद्यार्थीहरुले अनेक उपाय अपनाउँछन् । परीक्षा पास गर्नको लागि घोटिएर पढ्ने विद्यार्थी धेरै छन् त्यसबाहेक कसैले परीक्षा हलमै चिट लिएर जान्छन् र उत्तर चोर्छन् । केहीले भने परीक्षाको उत्तर पुस्तिकामै उत्तर पुस्तिका जाँच्ने शिक्षकलाई पत्र समेत लेख्छन् ।
यस्तै अनौठो घटना सामाजिक संजालबाट सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा हलमा आएपछि कुनै उपाय नलागेपछि यी छात्राले यतिसम्म आश्चर्यजनक काम गरेकी छिन । यी छात्राले आफ्नो लागि त निकै राम्रो उत्तर लेखिन होला तर के कोही नयाँ गीत लेख्दैमा पास होला र ? यी छात्राले सुरुदेखि अन्तिमसम्म केवल बलिउडका गीत लेखेकी छिन् ।
उत्तर पुस्तिकाको अन्त्यमा भने यी छात्राले आफ्नो गरिबीको हवाला दिँदै पास गराइदिन गुहारसमेत मागिन । यो कपी परीक्षण गर्ने शिक्षकले यी छात्राको गुहार त मानेनन् बरु यो कापी नै परीक्षा अधिकारीलाई बुझाइदिए । यो उत्तर पुस्तिकाको केही अंश अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । सामाजिक संजालमा यो उत्तर पुस्तिका जाँच्ने शिक्षक नै बेहोस भएको भन्दै फोटो भाइरल भइरहेको छ यद्यपि यो कुराको पुष्टि भने कतैबाट भएको छैन ।
खुसीको खबर सक्दो सेयर गरौं “फिर्ता हुने भयो सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली जमिन” यसरी भयो बेलायती मन्त्रीको ध्यानाकर्षण :-नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती रक्षामन्त्री ग्याविन विलियमसनलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धीमा गुमाएको नेपाली भू–भाग फिर्ताको पहलका निम्ति तीन बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
मोर्चाले नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्ध गोर्खा जवानको भर्ती र तिनको सेवासुविधासँग मात्र सीमित नरहेको भन्दै यो सम्बन्ध बेलायतसँग नासोको रूपमा हाम्रो माटोसँग पनि अझ बढ्ता रहेको जनाएको छ ।
नेपाल र बेलायतबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि भई तत्कालीन नेपालको ४०५ भन्दा बढी जमिन बेलायती साम्राज्यमा गाभिएकोमा बेलायत त्यस क्षेत्रबाट फर्किँदा त्यो जमिन नेपाललाई फर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा चटक्कै बिर्सेको मोर्चाको भनाई छ । ‘हामीलाई हाम्रो जमिन फिर्ता चाहिएको थियो तर तपाईंहरूले नेपालको जमिन भारतको अधीनमा रहन सक्तैन भन्न चाहनुभएन ।
हामी आज पनि हाम्रो भू–भाग फिर्ता लिन लालायित छौँ, जुन भारतको उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । त्यतिबेला मेचीपूर्व टिस्टा नदीको नगरकट्टासम्म र महाकाली पश्चिम सतलज नदीसम्म बेलायतको उपनिवेशमा रहेको हाम्रो जमिन बेलायतले त्यो क्षेत्र छाडेपछि त्यतिबेलै स्वतन्त्र भयो कि भएन ? के बेलायतले त्यो नेपाली भू–भाग भारतका हातमा छोडेर गएको हो ? के उपनिवेश हस्तान्तरण हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरेको छ ।
त्यस्तै मोर्चाले बुझाएको ज्ञापनपत्रको ३ नम्बर बुँदामा सुगौली सन्धिमा गुमाएको जमिन फिर्ता लिने कुरा कुनै जटिल समस्या नभएको उल्लेख छ ।
‘बेलायतले यो हाम्रो दायित्व हो भन्ने बुझिदिनुपर्छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा बेलायत सरकारले भारत सरकारलाई नेपालको जमिनमाथि भारतको कब्जा तत्काल अन्त्य गर्न दबाब दिनु बेलायतको नैतिक दायित्व हो भन्ने ठान्दछ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
मोर्चाले सैनिक कार्वाही गरेर फकल्यान्ड टापुमाथि बेलायती झन्डा फहराउने देशले सैनिक कार्बाही गरेरै गोआमाथि कब्जा जमाएको भारतलाई नेपालको जमिन सम्मानपूर्वक फिर्ता गर्ने बाध्यकारी वातावरण बनाइदेओस् भन्ने नेपाली जनताको मागमा समर्थन जनाउन हामीमाथि न्याय प्रदान गर्दै उपनिवेशको अन्त्यमार्फत स्वतन्त्रताको संखघोष गरोस् भन्ने माग दोहोर्याएको छ ।
अत्यत दुखद खबर ! धादिङ — काँकडभिट्टाबाट काठमाडौं आउँदै गरेकाे बस धादिङको गजुरी ६ बन्छेटारस्थित त्रिशूली नदीमा खस्दा पाँचजनाको मृ*त्यु भएको छ । मृ*त्यु हुनेमा एक महिला र ४ जना पुरुष रहेको उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुगेका प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार वैदवारले बताए ।
आइतबार बिहान ना ७ ख ४३८७ नम्बरको बस सडकबाट ६० मिटर तल त्रिशूली नदीमा खसेको हो। मृ*तक*हरुको सनाखत हुन नसकेको गजुरी स्थित प्रहरी निरिक्षक नवराज ढुंगेलले बताए।
दुर्घटनामा २८ जना घाइते छन्। घाइते मध्ये १४ जनालाई उपचारका लागि काठमाडाैं पठाइएकाे छ। अन्यकाे स्थानीय गजुरी, आदमघाट, मलेखु लगायतका अस्पतालहरुमा उपचार भइरहेकाे छ। दु*र्घटना*काे कारण खुल्न सकेकाे छैन।
भाग्यमानीले मात्र देख्ने यो दुर्लभ शंखको दर्शन गरि यसको महिमा पढीगर्नुहोस
किन चढाउनु हुदैन भगवान श्री गणेशलाई तुलसी ? यस्तो छ कथा
तपाईंका लागी नयाँ वर्ष २०७६ साल कस्तो छ, जान्नुहोस् तपाईको सम्पूर्ण नालीबेली
एउटै युवतीसँग साख्खै दाजुभाइको प्रेम, भाइका लागि दाजुले दिए जीवनकै बलिदानी…
यी ५ मूर्ति घरमा राख्नले मिल्नेछ खुशी र सुख !